बिना तयारी कसरी निर्बाचन हुन्छ? आयोग – नेपाल डायरी डट कम
अप्रील 13, 2007 अप्रील 13, 2007 by nepaldiary
बिना तयारी कसरी निर्बाचन हुन्छ? आयोग
नेपाल डायरी डट कम @9:30
[अब चिन्ता गरेर के गर्ने गिरीजा बाबु ! समयमा चिन्ता गरेको भए न तपाइले दुख पाउनु हुन्थ्यो न नेपाली जनता ले । तर अब समय बितिसकेको छ । अब चिन्ता गर्नु भन्दा कसरी निर्बाचन गराउने सोच्नु बेस । नत्र त तपाइकै सब्दमा तपाइको जुवा को खाल उठ्ने मात्र होइन , तपाइ लगायत हामि सबैको बनबास हुन बेर छैन । फोटो :- याहु न्युज ]
नयाँ बर्षको पुर्ब सन्ध्यामा आएर पुन एक पटक नेपाली राजनितिक आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको छ । लामो प्रयास र ठुलो आकंक्षाका साथ २०६४ असारमा गरीने भनीएको संबिधान सभाको निर्बाचन “सो मितिमा गर्न प्राबिधिक कारण”ले गर्न नसकीने भनेर निर्बाचन आयोग ले जनाउ दिए पछि पुन एक पटक संबिधान सभाको निर्बाचन् सर्ने मात्र होइन , नहुने नै पो हो कि भन्ने आसंका बढेर गएको छ ।
नेपाल डायरी डट कम @12.00
आखिर ८ माझिको सल्लाह ले गाउ डुब्ने नै भो । कति न ठुला ठुला गफ गरेर “जसरी ” भएपनि ” एबनर्मल स्थितिमा” एबनर्मल चुनाब ” भनेर रटान लगाएपनि नेपाली जनताको आखामा छारो हाल्दै आएका नेपालल्का राजनितिक दल हरुको नैटकी फेरी देख्न पाइने भएको छ । निर्बाचन आयोग ले पटक पटक चुनाबको लागी आबस्यक कानुन बनाउ भन्दा कानमा तेल हालेर बसे पछि एक्लो भोजराजको मात्र के लाग्छ र?
निर्बाचन आयोग ले आफुले असार ६ गते निर्बाचन गर्न नसक्ने पत्र सरकारलाइ बुझाएको छ । सरकारले असार ६ गते निर्बाचन गर्ने भने पनि निबाचन का लागि आबस्यक कानुन र निति तयार नगरेको ले असार ६ गते निर्बाचन हुन नसक्ने आयोग ले जनाएको हो । अहिले आयोग ले पत्रकार सम्मेलन गरी सो सम्बन्धि थप कुरा बताउने जनाएको छ । सरकारले आज बिहान बसेको मन्त्रीपरीशद को बैठक मा सो पत्रका ’boutमा छलफल गरेको र सो सम्बन्धमा ८ दलको बैठक बसी आबस्यक निर्णय हुने बताएको छ । अब …… सक्यो दैलो देख्यो भन्नु भन्दा ८ दलले अरु के नै गर्लान र? आखिर नहुने नै भो जस्तो छ संबिधान सभाको निर्बाचन । थुइक्क हुतीहारा हो , यति निर्बाचन त गर्न सकेनौ , अब के गर्छौ?
सरकार को कमजोरीका कारण असार ६ मा निर्बाचन हुन नसक्ने स्पट भएको हो । । निर्बाचन आयोगले सान्तिसुरक्षाको अनुकुल नभएको , निर्बाचनका लागी आबस्यक कर्मचारीको अभाब , सरकारको अनिच्छा र सबैतिर को असहयोगले अन्तत संबिधान सभाको निर्बाचन हुन नसक्ने ठहर गरेको हो । असारमा निर्बाचन गर्न बैसाखको पहिलो साता भित्र निर्बाचन अधिकृत को कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने, निर्बाचनको लागी आबस्यक कानुन निति नियम र कर्मचारी खटाउनु पनि समय नभएको , मत पटीका पुर्‍याउने र अन्य काम को लागी पर्याप्त समय नभएको र आयोग ले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्सण गराउदा पनि सरकारले टेरपुच्छर नलगाएकोले असारमा निर्बाचन असंभब भएको हो । “हामिले स्पस्ट भनेका छौ अब आउने निर्बाचनका लागी आबस्यक सबै कानुन बनिसके पछि पनि निर्बाचन तयारीको लागी कम्तिमा ११० दिन अगाबै मिति घोसणा गर्नु पर्नेमा सरकारले हालसम्म मिति घोसणा नगरेको ले प्राबिधिक कारण्ले २०६४ असार ६ मा निर्बाचन हुन नसक्ने हाम्रो ठहर छ ।” निर्बाचन् आयोगले भनेको छ । सरकारको गलत रबैया र विगत देखि को निर्बाचन टार्ने प्रत्यत्न स्वरुप निर्बाचन हुन नसके पनि नालायक दल हरु भने निर्बाचन आयोग लाइ दोस दिएर पन्छन बेर छैन ।
यस अघि दल हरुले मुखले भने ‘युद्धस्तरमा काम गरेर भए पनि असारमै निर्बाचन गर्ने’ झुटो आस्वासन दिदै आए पनि सरकार आफै संबिधान सभाको निर्बाचनको बिषय मा अन्योलग्रस्त रहेको ले अब संबिधान सभाको निर्बाचन कहिले र कसरी होला आसंका बढिरहदा सरकार भने बर्खा पछि वा आउदो मसिरमा चुनाब गर्ने भनेर जन आक्रोस साम्य पार्न सफल त होला । तर समय घुर्किदै जादा र संबिधान सभाको निर्बाचन हुन नदिन तत्व हरु ले चलखेल गरीरहेको अबस्थामा चुनाब सारेर के हामि जन आन्दोलन २०६३ को मर्म र भावनालाइ अपहेलना त गरीरका त छैनौ ? सब दलहरुले गम्भिरतापुर्बक सोचुन । नत्र २००७ साल मा सडयन्त्रपुर्बक रोकीएको संबिधान सभाको निर्बाचन २०६४ त के २०७० मा पनि सफल हुने छैन । नया नेपाल त परको कुरा।
अघिल्लो नया वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !!
अर्को आ-आफ्नै डम्फु